Shirkii golaha amniga ee Baydhabo oo la soo gabagabeeyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Shirkii golaha amniga ee Baydhabo oo la soo gabagabeeyay
Shirkii golaha amniga ee Baydhabo oo la soo gabagabeeyay
Waxaa magaalada Baydhabo ee xaruunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha amniga qaranka uu ku lahaa magaalada Baydhabo.
Shirkaan oo socday 3dii ilaa 5tii bisha Juun ayna kasoo qayb galeen madaxda dawladda federaalka iyo waliba kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu lafa guray arrimo muhiim ah oo la xiriira amniga guud ee dalka iyo siyaasadda.
Golaha amniga qaranka ayaa markii uu shirka idlaaday soo saaray war murtiyeed la xiriira natiijada kasoo baxday.War murtiyeedkaan ayaa taabanaya labada qodob ee amniga iyo siyaasadda.
Golaha amniga Qaranku wuxuu adkeynayaa in midnimada, wadajirka iyo madax bannaanida Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah.
Golaha amniga qaranka waxa uu isku raacay qorshaha kala guurka amniga oo ah qorshe awoodda loogu wareejinayo ciidanka qaranka Soomaaliya, marka ay baxaan ciidanka nabad ilaalinta Amisom.Qorshahaan waxaa ka mid ah mideynta ciidanka iyo qaabka loo hawlgalinayo heer federal iyo mid gobolba.
Guddiyo kala duwan ayaa loo saaray in mideeynta iyo isku dhafka ciidanka iyada oo guddiga iskudhafka ciidanka la faray in ay la yimaadaan qorshe hawlkeedooda muddo 30 bari.
Sidoo kale guddiga farsamo ee dhameystirka qorshaha amniga ayaa la siiyay muddo lixdan bari ah si ay ula yimaadaan habka dawladda federaalka ay uga caawin karto ciidanka booliska maamul goboleedyada agab iyo gunno ahaanba si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxaha dawladda kasoo horjeeda.
Golaha amniga qaranka ayaa si la mid ah iskugu raacay in maamul goboleedyadda Galmudug iyo Puntland laga taageero dagaalka ka dhanka ah kooxo dawladda kasoo horjeeda maadaama deeganadaas aysan Amisom joogin.
Golaha amnigu waxa sidoo kale isku raacay in ciidanka daraawiishta ee koonfur Galbeed ay qayb ka nqodaan hawlgalka lagu furayo waddada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo iyada oo doorka hoggaamineed ay qaadanayaan maaulka Koonfur Galbeed,inkasta oo goluhu isku raacay in inta hawlgalka socdo ay ka amarqaadanayaan taliska xoogga dalka.
Golaha waxaa uu si loo dhameystiro qorshaha amniga isla gartay in muddo soddon bari gudaheed xafiisyadda amniga laga furo magaalada Muqdsisho iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka si loo dardargaliyo hawlaha amniga.
Golaha amniga qaranka ayaa isku raacay in dalka laga hirgaliyo doorasho qof iyo cod ah sannadka 2020ka.Golaha amniga ayaa isla meeldhigay wadaagista kheyraadka dalka sida ku xusan heshiiskii wadaagista kheyraadka dalk eek a dhacay magaalada Baydhabo.
Golaha amniga qaranka ayaa si loo helo dastuur dhameystiran isku af gartay in la ahwlgaliyo guddiyadii dib u eegsita dastuurka ee maamul goboleedyada.
Shirkaan ayaa arrimo badan go,aan laga gaaray sida qorshaha kala guurka, wadaagista kheyraadkaiyo mideynta canshurta, iyo doorashada qof iyo cod oo la isku raacay in la qabto sanadka 2020ka.
Previous articleDiyaarad rakaab oo lagu la’yahay dalka Kenya
Next articleWarmurtiyeed laga soo saaray shirkii Golaha Amniga Qaranka (Akhriso)